Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Singam-bolo mandavo ny vositra | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Singam-bolo mandavo ny vositra
Valan’aretina, areti-mandringana, areti-mandoza. Samy azo ilazana ny zava-misy amin’izao fotoana izao avokoa izany. Fa avy aiza tokoa moa no niandohan’izao aretina tonga olana maneran-tany izao? Nisy ny fanadihadiana nataon’ny Firenena Mikambana amin’ny alalan’ny Sampan-draharahan’ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS, tany Chine, izay heverina fa niantombohany. Toa vita tsy vita ihany anefa izany iraka izany. Fa eo anatrehan’izany dia nisy fanontaniana adaladala, misary vazivazy, teraka tao anatin’ity olana ity. Toa mahalasa saina ihany ilay izy. “Mba nanao ahoana tokoa re izay ilay pangolin fototry ny olan’izao tontolo izao ankehitriny?”
Voalaza tokoa mantsy fa ny fihinanana ity karazam-biby ity no nitarika ny fifindran’ny otrikaretina tamin’ny olombelona tany am-boalohany.
Asa na marina izany na tsia, fa ny lesona azo tsoahina ao anatin’izany no tiana hasongadina. Efa telo tapitrisa mahery no namoy ny ainy noho ny Coronavirus maneran-tany ankehitriny. Tsy nisy nanam-po izany anefa ny rehetra telo taona talohan’izao. Raha sanatria, aleo sanatriavina, ka ity biby ity tokoa no niaingan’ny tantara dia azo lazaina fa singam-bolo nandavo ny vositra tokoa izy. Singam-bolo anaty lasopy, hoy koa ny fitenin’ny hafa.
Ny tiana hahatongavana dia tsotra ihany, raha mbola mitohy ny fanimban’ny zanak’olombelona ny tontolo iainana sy ny zavaboahary manodidina azy dia tsy hitsahatra ihany koa ny fahapotehantsika izay miaina eo anivony. Mandrora mitsilany ihany mantsy isika mamotika ny tontolo manodidina antsika. Aiza ka lasa ataon’ny sasany laoka ireo karazan-gidro sy varika eto amintsika. Ny fiovaovan’ny toetrandro sy ny voka-dratsy entiny dia efa iainana ankehitriny. Tsy any ivelany ihany no misedra izany fa isika ihany koa.
Raha hiverina amin’ny resaka Coronavirus isika, 17 ireo mpiray tanindrazana no namoy ny ainy afakomaly. Io no tarehi-marika ambony indrindra hatramin’ny nisian’ny aretina teto Madagasikara, raha amin’ny vokatra isan’andro izay taterina ao amin’ny haino aman-jery. Izany hoe mihamafy ny ady. Mbola ho lava ny lalao. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa.